Vaovao - Ny borosy volo tsara indrindra amin'ny fanaingoana ny manaonao
Mila borosy volo tsara ny tsirairay. Na ny famoahana knot na famoahana endrika hafa fotsiny ny volonao dia fitaovana marobe ilaina amin'ny fijerena ny tsara indrindra izany. Mazava ho azy, raha mitady havaozina vaovao ianao, dia ho azonao antoka fa hahazo iray vita tsara ianao ary haharitra.
Ny borosy volo dia efa nisy nandritra ny taonjato maro - raha mbola misy olona te-hanamboatra ny volon'izy ireo amin'ny fomba iray manokana amin'ny fotoana iray manokana. Fa tamin'ny 1777 vao nanokatra tany England, Kent, ilay mpanamboatra volom-bolo fanta-daza, izay nanampy tamin'ny fanaparitahana ilay fitaovana ary nahatonga azy io ho mahazatra kokoa. Ankehitriny, misy karazana fiovana isan-karazany amin'ilay raikipohy: borosy borosy, borosy boribory, borosy manelingelina ary maro hafa. Misy koa karazana volom-borona isan-karazany — na voajanahary na sentetika.
Ny borosy tadiavinao dia miankina tanteraka amin'ny endrika tadiavinao sy ny volon'ny volonao. Eto, efatra amin'ireo tsara indrindra azo alaina ao amin'ny Amazon.
1. Borosy Padush borosy Kent Beechwood
Kent dia nanamboatra borosy volo efa an-jato taona maro izao, noho izany dia misy dikany fa ny sorona volon-kisoa no anisan'ny tena tsara indrindra. Natao hanampiana hanaparitahana ny menaka voajanahary vokarin'ny hoditrao amin'ny volo manontolo, hihazona azy ho salama kokoa ary hampiroborobo ny fitomboany. Mazava ho azy, io koa dia hanampy amin'ny fanesorana ireo kitresitra mania izay mety nangonina nandritra ny andro. Ny tantely beechwood dia manampy fikitika koa.
2. Borosy volo Sonvera Boar Bristle ho an'ny lehilahy
Raha ianao no karazana te-manamboatra ny volonao mandritra ny eo anelanelan'ny fivoriana dia ny borosy Sonvera no ho anao. Ny borosy volotsangana dia mahavita tsara amin'ny azy samirery, nefa miaraka amina kitapo fandehanana ihany koa, mba hahafahanao mitondra azy amin'izay alehanao. Ny volom-borona dia vita amin'ny volo boar tsy misy fangarony, izay manampy amin'ny famindrana menaka voajanahary avy amin'ny hodi-doha, ary afaka mamakivaky volo matevina sy olioly ary volo mahitsy koa. Misy mpanadio borosy aza atsipy ao anaty fangaro, izay hanampy ny zava-bitan'ilay fitaovana amin'ny ankapobeny.
3. Borosy borosy ho an'ny lehilahy ny orinasa Kingston Grooming Company
Azonao atao ny mampiasa volom-bolo amin'ny volombavanao, raha teorika. Saingy lehibe loatra ho azy ny ankamaroany, ary hahatsapa ho mikorontana amin'ny fampiharana. Tsy izany ho an'i Kingston bika aman'endrika Borosy orinasa, izay mora eo an-tananao ary afaka ampiasaina ho an'ny volo eo an-tampon'ny loha sy ny volo eo amin'ny saokanao. Izy io dia borosy beechwood misy volon'ondry volo - volom-borona manamafy be, ka tsy hianjera. Ny endrika dia tsara eritreretina ihany koa, satria miolakolaka mamihina ny hoditry ny tarehy sy ny lohanao ary manosotra volo faran'izay betsaka araka izay azo atao.
4. Borosy Volo Belula Boar Bristle ho an'ny lehilahy
Vaovao amin'ny tontolon'ny fikolokoloana volo? Ianao dia mila setiana feno toa an'i Belula avy eo, izay tsy volo-borosy fotsiny fa borosy hazo, borosy palma roa ary kitapo fivahinianana. Ny sisiny dia tsara amin'ny fanesoana ireo fikorontanana henjana (sy fanadiovana ny borosy), ary ny borosy palma dia miasa tsara ho an'ny volombava. Ny borosy mahazatra ihany, mandritra izany, dia vita amin'ny akora biolojika: fingotra voajanahary, volombava ary volotsangana. Kitiho ao anaty kitapo fisintomana ilay zavatra rehetra ary azonao atao ny mitondra azy na aiza na aiza alehanao.